I-EDO: Ukulinganisa ukuzibandakanya kwabaThengi kwiNtengiso yeTV | Martech Zone
I-EDO: Ukulinganisa ukuzibandakanya kwabaThengi kwiNtengiso yeTV
NgoLwesithathu, Aprili 8, 2020 NgoLwesithathu, Aprili 8, 2020 Douglas Karr
Xa abantu bexoxa ngentengiso yedijithali, bahlala beshiya amajelo osasazo emveli anje ngomabonwakude nonomathotholo. Kodwa inkampani yosasazo izolo ayisenguye nje sasazo… Bathatha ukubandakanyeka kweemetriki kunye nokusetyenziswa ukuya kowesibini. Lonke unxibelelwano olwenzayo kwindawo ekude luyarekhodwa ukuphucula ngakumbi iinkqubo kunye nokujolisa kwintengiso. Into ebefudula iluncedo lweenkonzo zosasazo zale mihla ngoku iyabandakanywa kwintengiso yesiko likamabonwakude.
Eyona ndlela ibhetele yokufaka injongo yokuthenga kukungqamanisa intengiso zikamabonwakude nescreen sesibini uphando lwezinto eziphilayo. Umthengi ubukela urhwebo kwaye emva koko wenza ukukhangela kwinto leyo kwifowuni okanye ithebhulethi yakhe. Enye inkampani ekhokelela kwindlela yokulungelelanisa le ntengiselwano EDO. Abathengi kunye nabathengisi beentengiso zeTV baxhomekeke kwidatha yabo ukulinganisa ukuba ii-airings zabo zikazwelonke ziqhuba kakuhle kangakanani ukuthengisa kunye nokuthenga iifanels. Baye bangqina amaxesha ngamaxesha ukuba ukubandakanyeka kwabathengi kutyhila injongo yokuthenga. Babiza iteknoloji Ukuzibandakanya.
Yintoni iEntage Engagement?
Uthethathethwano lokuzibandakanya lwenzeka xa umsebenzisi etshintsha esuka kwifayile ye- umamkeli ongenzi nto yemiyalezo kwi nxaxheba kwinkqubo yokuthenga ngokukhangela kwi-intanethi kwintengiso yomthengisi. Ngokulungelelanisa ngokuthe ngqo ii-airings zentengiso kunye nomsebenzi wokukhangela, i-EDO inceda abathengisi bakhokele abathengi ngokukuko ngeentambo zabo zentengiso ukuya kuthi ga kwintengiselwano.
Ukuzibandakanya: Umzuzu weNyaniso
Isebenza njani iNtengiso yeNtengiso yeTV:
I-EDO ilinganisa ukuzibandakanya koPhando lwabathengi Kuzo zonke iimveliso eziphambili kunye neemveliso, ukufaka idatha eyimbumba eyaneleyo ukubonisa ukuba ukubandakanyeka kwabathengi kuludwe oluthile lwentengiso yeTV.
Ukuzoba iseti ye-EDO yeembali zomoya wentengiso (Indawo yogcino lwedatha yeTV) Iqela labo lesayensi ledatha liphuhlisa iindlela zobalo ezivula ukuqonda okunentsingiselo kubathengi beentengiso kunye nabathengisi.
Abathengi basebenzisa ezi nkcukacha ukulinganisa intsebenzo yoyilo lwabo, imithombo yeendaba yeTV, imikhankaso yeTV, kunye neenzame zabo bakhuphisana nabo.
Iingcali ze-EDO zisebenza kunye nabaxumi ukuphanda kwimibuzo entsonkothileyo yokwandisa kunye nokuphucula amaphulo exesha elizayo ngokwahlula uphawu lweTV olusebenza kakhulu ekuqhubeni ukuzibandakanya.
I-EDO ilungelelanisa intengiso kamabonwakude kwaye iyangqinelana nedatha yokukhangela i-24/7 ngaphandle kwesidingo sophando lwangaphambi / ngeposi. Nge-EDO, iinkampani zinakho:
Linganisa indlela umkhankaso wakho weTV oqhuba ngayo -Yazi indlela eliqhuba ngayo iphulo lakho xa kuthelekiswa nemikhankaso eyadlulayo, nokuba ingaba ifumana isabelo esaneleyo na esiSebenzayo. Linganisa intsebenzo yakho yentengiso kwimicimbi ebukhoma kunye nakuphi na ukudityaniswa okuxhaswe nguwe.
Lungiselela uyilo ngexesha langempela -Yenza uvavanyo lwe-A / B lokuphila kwakho kwiTV yakho ngaphandle komsebenzi owongezelelweyo okanye ulungiselelo. Vavanya ukuzibandakanya kwabathengi kwindlela nganye, emva koko wandise isicwangciso sakho sokuyila kunye nokujikeleza.
Yazi apho imithombo yeendaba yakho iqhuba ukubandakanyeka kwegama -Ukungena kwinethiwekhi, kwimiboniso, okanye kwiisuku eziqhuba olona hlobo lubalulekileyo lokuzibandakanya, emva koko ubeke idatha yeendleko ukuveza i-ROI.
Ibhentshi ngokuchasene nemikhankaso yabakhuphiswano -Qonda apho kusebenza khona amaphulo abanye ukuze ukhuphisane ngokukuko. Idatha ye-EDO idityaniswe ngokupheleleyo kwaye ayifuni lwazi lwabathengi babucala.
Cofa iingcali ze-EDO kuphononongo olunzulu -Iqela labo liyakukunceda ukwahlula kunye nokuhlalutya ixabiso elinxulumene noluphi uphawu lwentengiso yeTV eyahlukeneyo. Liqonde ifuthe lokhetho olwenzayo olufana nefomathi yentengiso, ubude beentengiso, iziqendu zesiko, okanye ukudityaniswa, kunye nokubekwa kwicandelo lezorhwebo.
Cela iDemo ye-EDO
tags: I ntengisoinjongo yokuthengakumabonakudeIntengiso yeTV
Qalisa ukuThengisa ngokuZenzekelayo kwiKhosi yakho ekwi-Intanethi ukuphumelela ukuThengisa okungakumbi kwe-B2B